Bit By Bit - Ukubuza imibuzo - 3.3.3 Ixabiso
Surveys Akakwazi, kwaye oku ngumqobo ngokwenene.
Ukuza kuthi ga ngoku, ndiye ngokutsha ngokufutshane sikhokelo imposiso phando iyonke, yona ngokwayo kwisifundo unyango ubude incwadi (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Nangona esi sakhelo ebanzi, oko ngokubanzi ebangela abaphandi ukuba aphume phandle ebalulekileyo: iindleko. Nangona iindleko-leyo kulinganiswa nokuba ngexesha okanye imali-ithe gca kunqabile kuxoxwa abaphandi zemfundo, nto ngumqobo zokwenene ukuba ngoyaba xa sisizuza yethu. Enyanisweni, zesampulu abaphandi isizathu ndlebe abantu kunokuba abemi yonke ngokusindisa imali. Ngoko, iindleko sibalulekile inkqubo yophando uphando (Groves 2004) . A uzinikelo umbaxa olunye-ekuchutheni impazamo ngelixa iindleko ngoyaba ngokupheleleyo ayisoloko imi best interest yethu.
Ngezithintelo phithi ekunciphiseni imposiso ibonisiwe yi isifundo esibalulekileyo Scott Keeter noogxa (2000) malunga neziphumo zemisebenzi endle eninzi ukuze ukunciphisa non-impendulo kuphando ngomnxeba. Keeter noogxa wabaleka iisaveyi ezimbini ngaxeshanye, elinye lisebenzisa "Standard" nkqubo omnye usebenzisa iinkqubo "engqongqo". Nangona iinkqubo "engqongqo" wavelisa luba nezinga eliphantsi lezehlo non-impendulo, uqikelelo ukusuka zombini iisampulu azufani liyafana. Nangona kunjalo, iinkqubo "engqongqo" yeendleko kalukhuni kabini kakhulu waza wathabatha amaxesha 8 elide. Ngaba bhetele 2 surveys afanelekileyo okanye 1 uphando acwengileyo? Kuthekani 10 surveys afanelekileyo okanye 1 uphando acwengileyo? Kuthekani 100 surveys afanelekileyo okanye 1 uphando acwengileyo? Ngaxa ezinye iingenelo iindleko kufuneka zibe ezingacacanga iinkxalabo, non-ngqo nomgangatho.
Uninzi adalwe ubudala yedijithali zingathethi ukudala iingqikelelo ukuba ngokucacileyo kufuneka impazamo esezantsi. Kunoko, ezi amathuba ukudala iingqikelelo kuxabise ngokukhawuleza, kodwa mhlawumbi iimpazamo ukuba ngoku ephakamileyo okanye nzima ukulinganisa. Njengoko uninzi imizekelo kwesi sahluko siza kubonisa, abaphandi mabafune phithi umbaxa enye kunye nokucutha imposiso ngokuncama kwezinye imilinganiso nomgangatho uza aluphoswa ngamathuba umdla. Njengoko le mvelaphi malunga sikhokelo imposiso uphando iyonke, ngoku siza kujika iinkalo ezintathu ezingundoqo ngexesha yesithathu uphando uphando: iindlela ezintsha ukumelwa (Section 3.4), iindlela ezintsha yemilinganiso (Section 3.5), kunye neendlela ezintsha yokudibanisa iisaveyi kunye nentwana digital (Section 3.6).